raageceele - Ku soo dhowow shabakadda raageceele
Ku soo dhowow shabakadda raageceele
Kulamo adag oo ka socda Cadaado iyo furitaanka shirka laga cabsi qabo inuu dib u dhaco
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi ay ka socdaan kulamo aan loo kala kicin oo u dhaxeeya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, maamulada Ximan iyo Xeeb, Galmudug iyo dhaqdhaqaaqa Ahlu Sunnaha gobolada...
Tag(s) : #Wararka
Gobolka Hiiraan kaliya oo maamul goboleed loo sameynayo
Magaalada B/weyne ee gobolka Hiiraan waxaa maalmahaan ku sii qulqulayay siyaasiyiin, Xildhibaano, xubno horay xilal uga hayay dowladihii dalka soo maray iyo aqoonyahano ka soo jeeda gobolka Hiiraan. Xildhibaan Daahir Xasan Cabdi oo ka tirsan mudanayaasha...
Dowladda Soomaaliya oo dejisay qorshe looga hortegayo weerarada Al-Shabaab
Wasaaradda amniga gudaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday inay dejisay qorshe looga hortegayo weerarada dagaalyahanada Al-Shabaab ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka oo dhan. Wasiirka amniga...
Dowladda Kenya oo wakhti u qabatay muwaadiniinteeda ka barbar dagaalamaya Al-Shabaab
Dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay u gacan haatineyso dhallinyaradeeda ka barbar dagaalameysa ururka Al-Shabaab inay isku soo dhiibaan, iyadoona sheegtay in haddii aysan taasi dhicin la marsiinayo ciqaabo kala duwan oo dhinaca sharciga loo marayo. Wasiirka...
Wafdi Xildhibaano ah oo la kkulmay shacabka magaalada Jowhar
Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe waxaa gaaray dhowaan wafdi isugu jira XIldhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka, kuwaasi oo kulamo kala duwan la qaatay qeybaha bulshada ee ku sugan magaalada Jowhar. Wafdiga ka socda Xildhibaanada Baarlamaanka...
Somali students tell feds of bullying in St. Cloud schools
The St. Cloud Area School District has once again caught the attention of the federal Department of Education over its treatment of Somali-American students. Civil rights officials with the U.S. Department of Education and the Justice Department are visiting...
Tag(s) : #News English
#News English 1
Kulamo adag oo ka socda Cadaado iyo...
Gobolka Hiiraan kaliya oo maamul go...
Dowladda Soomaaliya oo dejisay qors...
Dowladda Kenya oo wakhti u qabatay...
Wafdi Xildhibaano ah oo la kkulmay...
Somali students tell feds of bullyi...